14 Nabatanụ onye okwukwe ya na-esighị ike,+ ma ọ bụghị ime mkpebi banyere ajụjụ ndị dị ya n’obi.+ 2 Otu onye nwere okwukwe iri ihe niile,+ ma onye na-adịghị ike na-eri akwụkwọ nri. 3 Ka onye na-eri ghara ilelị onye na-adịghị eri,+ ka onye na-adịghịkwa eri ghara ikpe onye na-eri ikpe, n’ihi na Chineke anabatawo onye ahụ. 4 Ònye ka ị bụ ikpe odibo onye ọzọ ikpe?+ Ọ bụ nna ya ukwu ka ọ dịịrị ikpebi ma ọ̀ ga-eguzo ma ọ̀ ga-ada.+ N’ezie, ọ ga-eguzo, n’ihi na Jehova pụrụ ime ka o guzo.+ 5 Otu onye na-ewere na otu ụbọchị ka nke ọzọ;+ onye ọzọ na-ewere na otu ụbọchị dị ka ụbọchị ndị ọzọ niile;+ ihe doro onye ọ bụla anya, ya kwenyesie ike na ya. 6 Onye na-edebe ụbọchị na-edebe ya maka Jehova. Onye na-erikwa ihe na-eri ya maka Jehova,+ n’ihi na ọ na-enye Chineke ekele;+ onye na-adịghịkwa eri ihe adịghị eri ya maka Jehova,+ ma ọ na-enyekwa Chineke ekele.+ 7 N’eziokwu, ọ dịghị onye ọ bụla n’ime anyị dị ndụ maka onwe ya naanị,+ ọ dịghịkwa onye nwụrụ anwụ maka onwe ya naanị; 8 n’ihi na ọ bụrụ na anyị dị ndụ, anyị dị ndụ maka Jehova,+ ọ bụrụkwa na anyị nwụrụ anwụ, anyị nwụrụ maka Jehova.+ Ya mere, ma ànyị dị ndụ ma anyị nwụrụ anwụ, anyị bụ nke Jehova.+ 9 N’ihi na ọ bụ ya mere Kraịst ji nwụọ ma dị ndụ ọzọ,+ ka o wee bụrụ Onyenwe ndị nwụrụ anwụ+ na ndị dị ndụ.+ 10 Ma gịnị mere i ji ekpe nwanna gị ikpe?+ Ma ọ bụ, gịnị mere i jikwa elelị nwanna gị? N’ihi na anyị niile ga-eguzo n’ihu oche ikpe+ nke Chineke; 11 n’ihi na e dere, sị: “‘Dị nnọọ ka m dị ndụ,’ ka Jehova sịrị,+ ‘ikpere niile ga-egburu m n’ala, ire niile ga-ekwupụtakwa Chineke n’ihu ọha.’”+ 12 Ya mere, onye ọ bụla n’ime anyị ga-aza Chineke ajụjụ maka onwe ya.+ 13 Ya mere, ka anyị kwụsị ikpe ibe anyị ikpe,+ kama nke ahụ, kpebienụ+ na unu agaghị edebe ihe ịsụ ngọngọ+ ma ọ bụ ihe mkpọbi ụkwụ n’ihu nwanna.+ 14 Amaara m, e mekwara ka m kweta n’ime Onyenwe anyị Jizọs na ọ dịghị ihe rụrụ arụ n’onwe ya;+ ọ bụ naanị mgbe mmadụ weere na ihe rụrụ arụ ka ihe ahụ bụụrụ onye ahụ ihe rụrụ arụ.+ 15 N’ihi na ọ bụrụ na ị na-eme ihe na-ewute nwanna gị n’ihi ihe oriri, ị dịkwaghị eje ije n’ịhụnanya.+ Esitela n’ihe oriri gị bibie onye ahụ Kraịst nwụrụ maka ya.+ 16 Ya mere, unu ekwela ka e kwuo okwu ọjọọ megide unu banyere ihe ọma unu na-eme. 17 N’ihi na alaeze Chineke+ abụghị iri ihe oriri na ịṅụ ihe ọṅụṅụ,+ kama ọ bụ ezi omume+ na udo+ na ọṅụ+ nke na-esite na mmụọ nsọ. 18 N’ihi na onye bụ́ ohu Kraịst n’ihe a bụ onye Chineke na-anabata, ihe ya dịkwa ndị mmadụ mma.+ 19 Ya mere, ka anyị na-achụso ihe na-eweta udo+ na ihe na-ewuli ibe anyị elu.+ 20 Kwụsịnụ ibibi ọrụ Chineke naanị n’ihi ihe oriri.+ N’eziokwu, ihe niile dị ọcha, ma ọ bụụrụ mmadụ ihe ọjọọ, ma ọ bụrụ na ihe onye ahụ na-eri na-akpata ịsụ ngọngọ.+ 21 Ọ dị mma ka ị ghara iri anụ ma ọ bụ ịṅụ mmanya ma ọ bụ ime ihe ọ bụla nke ga-eme ka nwanna gị sụọ ngọngọ.+ 22 Okwukwe ahụ i nwere, nwee ya n’ebe gị onwe gị nọ n’ihu Chineke.+ Obi ụtọ na-adịrị onye na-adịghị ama onwe ya ikpe mgbe e mesịrị n’ihi ihe o kpebiri ime. 23 Ma ọ bụrụ na o nwere obi abụọ, ọ bụworị onye a mara ikpe ma ọ bụrụ na o rie ya,+ n’ihi na o siteghị n’okwukwe na-eri. N’ezie, ihe ọ bụla nke na-esiteghị n’okwukwe bụ mmehie.+